हिरासतमा रहेका महरा बि’रामी, उच्च र’क्तचा’पसँगै स्वा’स-प्र’श्वासको स’मस्या ! – Life Nepali
हिरासतमा रहेका महरा बि’रामी, उच्च र’क्तचा’पसँगै स्वा’स-प्र’श्वासको स’मस्या !
काठमाडाैँ, २० असाेज । यौ’न दु’व्र्यवहारको आरोपमा प’क्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरामा स्वा’स्थ्य स’मस्या देखिएको छ । सिंहदरबारस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तको हिरासत कक्षमा रहेका महरालाई उच्च र’क्तचा’पसँगै श्वा’स-प्र’श्वासको स’मस्या देखिएको हो । महरालाई हिरासत कक्षमै अ’क्सिजन दिइएको छ । संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शा’हीमा’थि ज’बरजस्ती क’रणीकाे प्रयास गरेको आ’रोपमा महरालाई आइतबार साँझ प्रहरीले बालुवाटारस्थित सभामुख निवासबाटै प’क्राउ गरेको थियो । गएराति त्रिवि शिक्षण अ’स्पतालमा महराको स्वा’स्थ्य प’रीक्षण गरिएको छ । प्रहरीले उनको नि’यमित तथा फोरेन्सिक दुवै तरिकाबाट स्वा’स्थ्य जाँच गरेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अ’नुसन्धनबाट यही असोज १२ गते राति त’त्कालीन सभामुख महरा तीनकुनेस्थित रोशनीको कोठामा गएको पुष्टि भएको थियो । उनकाे बयान लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीकाे भनाइ छ ।
रोशनीले बनाइन महराको जीवन अ’न्धकार
Previous पैसा हराए कमाउन सकिन्छ तर संस्कृति हराए सर्वस्व हराउछ तपाईं हराउनुहुन्छ
Next महरालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आचरण बिगार्नेलाई म सहन्नँ’